fampianarana tsy misy kilema - Dinika forum.serasera.org
fampianarana tsy misy kilema
Fitohizan'ny hafatra : fampianarana tsy misy kilema
Mrsrb - 14/11/2017 13:24
II Tim.4:3-4 "Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema; fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany; ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano."
efa tena maro ankehitriny ny olona no mamory mpampianatra ho azy satria tsy mahazaka ny tena marina avy @ A/ tra.
stahtam - 15/11/2017 05:45
Ka inona no olana ?
endriny - 15/11/2017 06:44
Ny biby sy ny olona sembana ry zareo no ampiasana ny teny hoe Kilema fa tsy ny zavatra a. Maninona raha atao hoe fampianarana marina na tsy misy tomika?
Fa isika dia milaza foana fa ny olona dia tsy lavorary eo anatrehan'Atra. Ka ilay boky entina mampianatra bilobiloka bibilika koa ange nosoratan'olona. Ka tsy misy diso ahoana moa?
RBNIR - 15/11/2017 14:32
Misy fahamarinany, rehefa ny tongotra no somary mihoatra kely na somary fohy dia izay no lazaina fa kilemaina ny olona iray, dia otran'izany ilay fampianarana misy kilema,
Na nampiana, na nanesorana ilay izy....
Ny tsy misy kilema kosa dia manaja tsara ity teny ity....« Aza ampianareo ny teny izay andidiako anareo, ary aza anesoranareo, fa tandremo ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo izay andidiako anareo. » (Deot.4:2)
Manamafy an'izany ny teny any amin'ny apokalipsy....« Izaho dia manambara amin'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity: Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy; » (Apokalypsy 22:18)
Ny fampianarana tsy misy kilema = tenin'Andriamanitra tsy ampiana sady tsy anesorana....
rhaj0 - 15/11/2017 14:38
Ny toerana voatokana dia ho an'ny bevohoka sy kilemaina.
TSY mila amena toerana voatokana (eto) izany ny "fampianarana tsisy kilema".
RBNIR - 15/11/2017 14:43
Ankoatran'izay dia izao...tsy misy kilema satria fampianarana noraisina mivantana avy tamin'Andriamanitra....
Hoy i Jesosy hoe.....« Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe: Tsy Ahy ny fampianarako, fa an'izay naniraka Ahy. » (Jao.7:16)
Hoy koa i paoly apostoly hoe....« Fa ampahafantariko anareo, ry rahalahy, ny amin'ny filazantsara izay notoriko, fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany. » (Gal.1:11)
Ankehitriny dia misy olona nomena fampianarana tahaka izany koa....
rhaj0 - 15/11/2017 16:00
RBNIR tsy misy kilema satria fampianarana noraisina mivantana avy tamin'Andriamanitra....
Izany hoe TSY (mila) mandalo Baiboly intsony izany ianareo ry RBNIR (sy HRNRN)??
Io efa lazainao fa azo direkta io ny "tsisiklem" koa inona indray??
Dia nefa toa mbola ny Baiboly ihany ho'a no vakian'i HRNRN io??
endriny - 15/11/2017 16:23
Poikany! Tsy baiboly iny vakiany iny fa bilobiloka bibilika
Miharena - 15/11/2017 18:23
Ny Tenin'Andriamanitra madio mangarangarana no tena fampianarana tsy misy kilema.
Izay fandikana arak'olombelona tsy mbola matotra sy tsy ampy no mahatonga azy ho misy kilema.
Fa raha tsy miaiky fa avy amin'Andriamanitra ny Baiboly dia ireo no olona mampianatra izay saimpantany.
rhaj0 - 15/11/2017 19:41
Fa misy koa izany ny Ny Tenin'Andriamanitra TSYmadio mangarangarana izay raisin'ireo Mpino (tsy matotra na akory hoe adala) manaraka ny "fampianarana misy kilema".
Sampona mihintsy nareo itony ry Miharena...
RBNIR - 16/11/2017 09:33
Hoy i Jesosy tamin'ilay olona nampianariny ery ambony hoe "hampianariko aminao daholo ny fahamarinana rehetra ao anatin'ny baiboly, indrindra fa ny bokin'ny apokalipsy....;
Mba henoy aloha ilay vidéo e!!!
Miharena - 16/11/2017 09:42
Tsy lavina ny fisian'ny mpampianatra tsy mbola ampy fa manao ihany izy arak'izay mba heriny eo satria izay no mahatery azy. Ho an'ny olona mandray dia mandinika ary mijery taratra ny ao anaty Baiboly hahafahany mamantatra fa mety na tsia izay lazain'ny mpampita na mpampianatra isanisany.
Mora fantatra ny fampianarana mifangaroharo fihevitr'olombelona ary izany matetika no hampahatsiahivina eto mba tsy handeha any amin'ny tsy izy ny olona na hanonofy foana na hilaza fa imazinasio izay voambara sy ny zavamisy mihatra amin'ny olombelona sy ny fiaraha-monina hita taratra fa efa ho avy voasoratra ao anaty Baiboly ao.
rhaj0 - 17/11/2017 13:06
Ka misy ve azany aloha sa tsy misy ity hoe "Ny Tenin'Andriamanitra TSY madio mangarangarana", dia izay no sarangotin'ny mpampianatra misy kilema?
Miharena - 17/11/2017 18:15
Tsia no valin'io fanontaniana io.
Tsy misy Tenin'Andriamanitra tsy madio izany fa izay voalaza ao dia mazava sy marina satria misy sy iainana.
gasy1zay - 17/11/2017 20:05
Tsy ny tenin'Andriamanitra no tsy madio, fa ny fandraisana azy hors contexte no mandiso ny fampianarana satria lasa tsy raisinao feno ny baiboly,
Ohatra hoe ny zanak'Israely tsy nahazo nihinana kisoa satria tao anaty lalana niainan'zareo io, fa ao @ testamenta vaovao dia mazava ny hafatr'i Jesoa, fa tsy ny miditra ao am-bava no mampaloto ny olona.
Ka raha ny voalaza taloha fotsiny no tanisaina dia ohatrany hoe manafoana ny tenin'i Jesoa , ny nosoratan'i Paoly sns...
rhaj0 - 17/11/2017 21:52
ka avelan'izao Andrmntra aviraviran'izay tia amiravira azy izany izao "Teniny" izao.
Fa ry Gasy1zay hono izany TSY mba mamiravira mihintsy, araka ny fitsarany ny tenany ao ihany, sy araka ny imazinasion-ny ao.
Sirika be anefa ilay pensee mazikan'i GAsy1zay in-1 mandeha. Efa lazaina foana fa lavabe ny kritera hahazoana ny fen'anana-manjakizay, hozy ny Teny, fa i Gasy1zay, "namiravira resaka', dia hoe, raha i Gasy1zay "mijaly" iny hono no maty izy teo, sa moa, raha Gasy1zay mivavaka iny no maty (tsunami), dia tonga dia direkta mahazo fen'anana-manjakizay HONO, hozy ny pensee-mazikan'i Gasy1zay, fa TSISY dikany intsony izay kritera nalahatry ny Teny teo.
maninona tokoany moa... fa dia INOY ao izany ny toa io, dia lazao fa TSy mamiravira Teny i Gasy1zay ee... ao@ imazination-naoao.
gasy1zay - 17/11/2017 22:58
Tena mino aho rhaj0 fa raha lasa anio dia hihaona @ Tompo a! Izy ty anie hoa sady sambatra velona no mbola sambatra lavitra rehefa miala ety e!
Miharena - 18/11/2017 05:24
Ny marina Rhaj0 dia misy Lalana mahitsy voasoritra ao anaty Baiboly ao dia io no asain'ny Mpahary arahan'ny olombelona rehetra mba hahazoany fiainana mandrakizay.
Tsy mavesatra io lalana io fa ny olona tsy manaiky fa mihevitra fa ny lalan'izao tontolo izao no izy fa tsy io lalana voasoritra mazava sy masina io dia efa manary ny tenany.
Ny fatra-panohitra moa dia efa manao ny tenany hoe mandehandeha eny amin'ny tsy misy fitodiany eny dia ireo anjely nivadika no mandray an-tanana azy rehefa tonga ny ora farany andaozany ny fiainana eto ambonin'ny tany nametrahana azy.
Fa eo ihany isika, ilay lalalalala moa dia anisan'ny mampaharary an-dRhaj0 mihitsy fa satria hita fa IRAY ihany no Mpahary ka mahatonga fahasadaikarana rehefa sendra voatsindrona ny ati-fanahy na dia milaza tsy hitaiza tena ara-panahy aza.
endriny - 18/11/2017 06:36
Tenin'Atra Sady tsy ampiana no tsy and sorona hono Kanefa izy mianakavy ihany no nisafidy izy boky narafitra ho tenin'Atra.
Izaho koa no adala, kay moa ry zareo ihany no Atra eto an-tany.
Miharena - 18/11/2017 12:59
Tsy hoe ianao no adala fa ny adalanao dia mijery olona fa tsy mijery IZAY voasoratra sy Nampanoratra dia manao an'Andriamanitra tsy misy tampoka ohatra na koa manankiana fotsiny ranoray.
Mety hoe hahafantarana ny marina ihany ny fomba fitondra ilay adihevitra fa saingy raha toa ka hampidirana olona amin'ny fomba fijery tsy misy hivoahany any amin'ny fahazavana dia tsy ilaina loatra angamba an!